Heshiiska Mareykanka iyo Shiinaha ee ku saabsan joojinta labada dhinac ee waajibaadka canshuuraha – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Heshiiska Mareykanka iyo Shiinaha ee ku saabsan joojinta labada dhinac ee waajibaadka...
Heshiiska Mareykanka iyo Shiinaha ee ku saabsan joojinta labada dhinac ee waajibaadka canshuuraha
BEIJING – Shiinaha iyo Mareykanka ayaa Khamiistii ku heshiiyay in ay kala baxaan waajibaadka canshuuraha ee ay soo saareen dagaalkii ganacsi ee muddada dheer socday.
Wasaaradda Ganacsiga Shiinaha ayaa sheegtay Khamiista in Beijing iyo Washington ay ku heshiiyeen labadii toddobaad ee la soo dhaafay inay si wada jir ah u baabi’iyaan lacagaha canshuuraha ee heerar kala duwan ah.
Shiinaha iyo Mareykanka waa inay isdhaafsadaan xoogaa cashuur si ay u gaaraan “hal weji” oo ah heshiiska ganacsiga, afhayeenka wasaaradda Gao Feng ayaa yidhi, ciribtirka canshuuraha waa xaalad muhiim u ah heshiis kasta.
Feng wuxuu sheegay in heerka tirtirka lacagaha la joojinayo ay lamid tahay baahida loo qabo in laga wada xaajoodo baaxadda khidmadaha la joojinayo, isagoo xusay in dagaalka ganacsiga “uu ku billowday ajuuro ayna tahay inuu ku dhammaado baabi’inta,” sida ay qortay “Reuters.”
Ilo xog ogaal ah ayaa horay u sheegay in gorgortanka Shiinaha uu doonayey in Mareykanka uu baabi’iyo jadwalka 15 boqolkiiba ee qiimaha badeecadaha Shiinaha oo qiimahoodu gaarayo $ 125 bilyan, taas oo shaqeyneysa tan iyo 1dii Sebtember, oo ay doonayaan in ay baabi’iyaan canshuuraha hore ee soo dejinta ee mashiinnada, semiconductor-ka iyo alaabta guryaha. $ 250 bilyan.,
ilo xogo gaal ah ayaa sheegaya mowqifka wadahadalka Shiinaha ayaa sheegay in Beijing ay ku cadaadineyso Washington “inay joojiso waajibaadka oo dhan sida ugu dhaqsaha badan.”
Previous articleDaraasad cusub oo shaaca ka qaaday waxyeelada cunada dufanka badan
Next articleUS-China agreement on mutual phasing out of customs duties
C.raxmaan c.shakuur oo ka hadley sadex dalku rabo
Kenya oo digniin adag u dirtay Al-Shabaab